Miehsuo waxay si guul leh u gelisaa dardargeliyaha Iradiation ee IXPE iyo IXPP shucaaca xumbo
Hambalyo dhammaan shaqaalaha Meishuo iyo dhammaan macaamiisha taageera ganacsiga Mesihuo! Akhbaar wanaagsan oo ah in Huzhou Meishuo New Material Co., Ltd. uu si guul leh ugu rakibay dardargeliyaha shucaaca badhtamihii Noofambar,2021. Waxayna ku biirtay wax soo saarka tirada badan...
Maxay ka samaysan tahay xumbo XPE? Iyo habraaceeda?
Xumbada XPE waa nooc ka mid ah xumbo polyetylen ah oo kiimiko ahaan isku xidhay. Sida xumbada XPE ay leedahay qaab-dhismeedka unugyada xiran kaas oo loogu yeero xumbo madax-bannaan, sidaas darteed Meishuo waxay leedahay farsamadan si ay u soo saarto habka soo socda: Tallaabada 1: Masterbatch Qalab ceeriin oo kala duwan sida miraha, wakiilka xumbo, wakiilka midabka ...
Huzhou Meishuo New Material Technology Co., Ltd. waxaa ka go'an horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta xumbo polyolefin-isku-xiran.
Huzhou Meishuo New Material Technology Co., Ltd. waxaa ka go'an horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta xumbo polyolefin-isku-xiran. Alaabooyinka ugu muhiimsan waa xumbo IXPP, xumbo XPE, xumbo IXPE iyo xumbo ka hortagta ESD. Kooxda Meishuo waxay si qoto dheer ugu lug lahayd warshadaha 20 sano ...